Tobobarka galmada iyo HBTQ - Youmo
Sexuell läggning och HBTQ - somaliska
Tobobarka galmada waxaa ku saabsan tahay jinsiga qofka aad jeclaatay iyo soo jiidashadiisa. Waxaad xaq uleedahay in aad jeclaato aadna la socoto qofkii aad rabto. Dalka isweedhan waa sharci midaas.
Waxaa jiro qaabab kala duwan ee tobobarka galmada. Saddexda nooc ee caadiga ee tobobarka galmada waa:
Si toosan, oo toos ah
Waxaad kugu dhici jacayl ama waxa ku soo jiidanayo galmada dadka kaa jinsi duwan.
Nimanka qaniisiinta, Naagaha qaniisiinta
Waxaad kugu dhici jacayl ama waxa ku soo jiidanaayo galmada dadka aad isku jinsi tihiin.
Labeeb, ragga iyo dumarkaba damca
Waxaa kugu dhici jacayl iyo galmada soo jiidaneyso dadka iyadoo aan loo eegin jinsigooda.
Adiga ma go’aamineysid nooca jinsi ee aad yeelaneyso. Jinsigaaga wuu isbadeli karaa inta aad ku gudo jirtid nolosha.
Si aad wax galmo ula sameyso qof jinsi gaar ah, macnaheedu ma aha in aad leedahay jinsigaa.
Macquul ma ahan in laga arko qofka nooca jinsi uu leeyahay. Wax saamayn kuma yelanayo danaha ama muuqaalka.
Waxaa caadi ah in laga fekero doorashada jinsiga galmada. Gaar ahaan haddii aadan dareemin sida caadiga aha. Waxaa laga yaabaa in taasi ku xiran tahay in dadka kale ey u fikiraan in aad tahay jinsiga caadiga ah. Haddii ay saas tahay waxaad dareemi kartaa kelinimo ama nooc kale.
Waxaad jeclaan kartaa qofkaad rabto
Waxaa xaq u leedahay in aad jeclaato qofkaad rabto. Waxaad xaq uleedahay in aad kunoolaato nolashaada sida aad rabto. Waad guursan kartaa qof aad isku jinsi aad tihiin sida adiga ama jinsi kale oo kaa badelan.
Dalka iswiidhan ma jiro jinsiga galmada ee khalad ah ama ciqaab mudan.
Waad go'aansan kartaa haddii aad rabto in aad sheegto
Adigaa go’aansanaya haddii aad rabto in aad u sheegto dadka kale wax ku saabsan hanaanka jinsigada.
Adigaaga leh jinsiga caadiga ah uma baahnid in aad u sheegto qof kale, waayo ddka badigood waxay kuugu tirinayaan jinsiga caadiga ah. Haddii aad tahay khaniis ama labeeb, ayaa waxaad dareemeysa inaad u baahan tahay inaad sheegto sababtoo ah waxay sida caadiga ah u malaynayaan in aad tahay jinsiga caadiga ah.
Waxaad heli kartaa caawimad iyo taageerid
Mararka qaarkood waxay noqon kartaa wax adag ama aan macquul aheyn in loo sheego dadka kale waxa ku saabsan hanaanka-jinsiga. Tusaale ahaan, haddii dadka qabaan khaniisnimada ey la yaab leedahay ama khalad tahay.
Waxaad xaq uleedahay in aad u noolaato sidaad rabto, caawimaadna waad heli kartaa hadaad ubaahan tahay.
Usheeg qof haddii si qalad laguula dhaqmo ama hadii aad dareento hanjabaad. Tusaale ahaan, u sheeg saaxiib, kalkaalisada dugsiga, ama qof un rugta dhalinyarada.Kuwa ka shaqeeya dugsiyada iyo xarumaha caafimaadka dhalinyarada waxaa haya xeerka sirqarinta.
Waxaa jiro hayado kale kuwaas oo lashaqeeyo HBTQ arrimahooda, Tusaale RFSL iyo dhalanyarada RFSL. Iyaga oo aad ka heli karto xubnaha kale HBTQ, ka qayb qaado hawlaha ama raadso taageero ku saabsan arrimaha sharciga. Raadi RFSL kuwooda cusub gaar ahaan waa kuwa ku cusub Iswiidhen.
Hubi intarnetka waxa laga heli karo halka aad ku nooshahay.
Sharci daro in la midab takooro
Waxay noqon kartaa midab takoorid haddii laguugla dhaqmo si ka hoosaysa kuwa kale sababtuna ay tahay nooca jinsigaaga galmada. Waa sharci darro.
Haddii qof uu ku rabshadeyo sababta oo ah nooca jinsiga galmadaada waa dambi aad u culus waxa loogu yeedha dambiyada nacaybka.
HBTQ waxey u taagan tahay erayada Homosexuella, Bisexuella, Transpersoner, Queer. Ingiriisiga waxey LBGTQ, utaagan yihiin Lesbian, Bi, Gay, Transgender, Queer.
Sida caadiga ah waxay ka dhigan tahay in aad dareento sida jinsiga ka duwan waxa kugu qoran baasaboorkaada.
Queer macnaheedu waa in aadan jeclaan xeerarka aan qornayn oo ku saabsan jinsiga, cilaaqaadka iyo jinsiga heerka galmadaada. Waxay tusaale ahaan noqon kartaa in aadan rabin in aad dhahdo in aad leedahay nooc jinsiga galmada gaar ah ama jinsi gaar ah.
Xuquuqda dadka-hbtq oo Iswiidhan (pdf)